उपभोक्ता हितप्रति नैराश्यता चाडबाडमा बढी समस्या «
काठमाडौँमा मात्र १ सय ५५ पानी प्रशोधन कम्पनीहरू छन्, एसोसिएसनमा आबद्ध मात्र हुन् यी । आबद्ध नभएका अरू पनि होलान् । सकेसम्म धारामा पानी नआओस्, आए पनि राम्रो र पर्याप्त नआओस् भन्ने मनसाय हो भने भन्नु केही छैन तर पानी नभएको स्थान गोकर्णेश्वर नपाले ५ वडामा पानी उत्पादन, बोरिङ प्रशोधन गर्न सम्पूर्ण तयार गरी दुई–तीन ठाउँमा काम सुरु नै गर्दा पनि उसले काम गर्न सकेन र मेसिन सबै औजार फिर्ता लगेको प्रत्यक्ष देखेभोगेकै हो । यदि कसैको खराब स्वार्थ छैन भने सुरु गरिसकेको काममा यस्तो किन हुन्छ ? र आमउपभोक्तालाई जारकै पानीमा किन बाध्य पारिन्छ ? कपडा धुन, सरसफाइलगायत दैनिक अन्य काममा पनि जारको पानीबाट कति सम्भव छ त ? खानेपानी लाइन नभएका स्थानमा, जहाँ बाक्लो बस्ती छ त्यहाँ सम्बन्धित निकायले आफैं हेरी पानीको पाइप मात्र भए पनि वितरण गर्नुपर्ने होइन र ! सबैको जे गति, समान, समानुपातिक वितरण हुँदा कम पानी आए पनि राष्ट्रिय समस्या हो भनेर चित्त बुझाउन त सकिन्थ्यो नि । वर्षाैं अघिदेखि सयौँको संख्यामा दिइएको संयुक्त निवेदनमा किन सुनुवाइ हँुदैन, कानमा तेल हालेर थाहा नपाएजस्तो गरेर सरकारी निकाय चुपचाप बस्न मिल्छ ? नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा हामी पानी ६ महिनाभित्र खुवाउँछौँ भनेर त्यो क्षेत्रमा भाषण गरेको चुनावताका नै हो र अहिले पनि प्रत्येक पटकको भाषणमा ६ महिनाको रटान दिइरहन्छन्, वडा अध्यक्ष, नपा प्रमुख, प्रदेश सांसदहरू । पछिल्लो पटक दिइएको समय ६ महिना पनि बित्नै लागेको छ, अत्तोपत्तो छैन, पानीको पाइपको ! पानी नै वितरण हुन त मेलम्चीकै हालत होला ।
सामान्य अवस्थामा पिउने पानी नै काठमाडौँमा दैनिक साँढे ३ लाखवटा जारको प्रयोेग भइ रहेको र बन्दाबन्दीमा आधाआधी मानिसहरू राजधानीबाहिर रहेका, होटलहरू बन्द रहेकाले डेढ लाखवटा जार दैनिक प्रयोगमा आएका छन् । जारको पानीको मूल्यको मुद्दा संसदीय समितिमा पुगेका खबर पनि बाहिरिएका छन् । यदि त्यसो हो भने पनि चाडबाडको मुखमा निर्णयमा ढिलाइ हुनु भएन । साविक रु. २५ मा गाडीबाट जार झार्ने गरिएको विगतको यथार्थमा हाल परिवर्तन हुनु भएन ।
देशमा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार पिउने पानीको गुणस्तर निर्धारण हुने गरेको छ । पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका, २०७४ अनुसार खानेपानी उद्योग, ढुवानी व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीहरूले नियमावलीलाई अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ मा अनुचित व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था छ । दफा १९ मा बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, जारको पानीमा लेदो, कीरा भेटिनु राम्रो प्रबन्ध होइन । गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा नाफाको व्यापार त चम्केला, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ । त्यतिमात्र होइन, नयाँ जार लिएर जाने, थोत्रा, कुच्चिएका, १० ठाउँमा कोरिएका पुराना जारहरूबाट पानी वितरण गर्ने गरिँदा आमउपभोक्ताहरूमा नैराश्यता छाएको छ । नियमन गर्ने निकाय यस्ता विषयमा मौन बस्नु भएन । दसैंतिहारमा चिनीको अभाव हुनु, रोगी–सिँगाने राँगा, खसी, बोकाहरूको बिक्री हुनु र सहनु अनि खेतीको सिजनमा रासायनिक मल नपाउनु त हाम्रो नियति नै भएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तीनै तहबाट निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने यस वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा पु-याउने उल्लेख छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आवको सुरुदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिने, यो योजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य गर्न रु. ५ अर्व ४६ करोड विनियोजन गरिएको, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापनका लागि रु. ५ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको देखिन्छ । तर आगामी आवकोे सुरुमै मेलम्चीको पानी सम्भव होला ? गम्भीर प्रश्न हो यो । ढलको व्यवस्था गर्न बर्सेनि रकम राखिन्छ, तर कामपा ७ नं. वडामा ढलको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको महिनौँ भयो, बहाना बनाइन्छ धेरै, काम भएको छैन, भए पनि पहिले उपभोक्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ भनिएको छ, रकम जम्मा हुन्छ इस्टमेट गर्न लगाउनुप-यो भन्दा इस्टमेट नै गरिएको छैन । उपभोक्ताले न्याय कहाँबाट कसरी पाउने त अब !